द अंग्रेजी प्रिमियर लिग ट्रेन द्वारा घुम्दै | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > द अंग्रेजी प्रिमियर लिग ट्रेन द्वारा घुम्दै
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 25/12/2020)
रुचि हुनु हुनेछ जसले यात्री लागि खेल, दौरा इङ्गल्याण्ड लागि प्रिमियर लिग मिलान विशेष हुन सक्छ अनुभव. केही टिमलाई उठ्नेछ र गिर गर्दा प्रत्येक सिजन लीग देखि, यसलाई अर्थ कहिल्यै ठीक नै दुई पटक एक पंक्ति मा छ, यो सबै इङ्गल्याण्ड र वेल्स बाहिर फैलाउन कि साँचो सधैं छ. यो वास्तवमा प्रिमियर लिग देश अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ यस को लागि प्राकृतिक यात्रा एक प्रकारको बनाउँछ. यो सबैभन्दा प्रमुख शहर समावेश, केही सबैभन्दा भावुक प्रदर्शित को स्थानिय संस्कृति, र केहि साँच्चिकै अविश्वसनीय स्टेडियमहरू. प्लस, एक शहर देखि अर्को गर्न सवारी तपाईं प्रसिद्ध ब्रिटिश देहात को राम्रो झलक दिन सक्छ!
सत्यता भ्रमण यस प्रकारको फरक तरिका को सबै प्रकार मा डिजाइन गर्न सकिएन, को प्रिमियर लिग हुन्छन् कि दिइएको 20 प्रति सिजन टोली. यो हुनत नमूनाको कुरा हो, विभिन्न रुटमा तपाईंलाई र गर्न सक्छन् शहर, स्टेडियमों, र टोली तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ.
यो दुई कारण लण्डन यात्राको यो क्रमबद्ध सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. पहिलो, तपाईं भन्दा चाहाने जहाँ यो छ उड जसरी मा. र दोस्रो, यो धेरै प्रिमियर लिग क्लब घर हो, यसलाई अर्थ सुरु गर्न एउटा राम्रो ठाउँ र अन्त्य हो तपाईंको यात्रा ब्रिटेन वरिपरि राम्रो पाश लागि. तपाईं धेरै क्लबहरू सुरु सक्छ, तर म स्टामफोर्ड ब्रिज मा चेल्सी देखेर सिफारिस गर्न चाहन्छौँ. यो स्थल उत्कृष्ट छ, प्रिमियर लिग स्टेडियमों को एक स्तर संग हवाला 140 इतिहास र चरित्र वर्ष सबै भन्दा राम्रो बीच यो राख्न भनेर तत्व रूपमा. र टोली लगभग सधैं प्रतिस्पर्धी छ (र हुनुपर्छ 2018 साथै).
लन्डन बाट, सुरु गर्न एक तार्किक मार्ग ब्राइटन तिर दक्षिण छ. यो ब्रिङ्टनको इङ्गल्याण्ड गरेको सर्वश्रेष्ठ बीच सहर मध्ये एक मा समाप्त एक धेरै छिटो सवारी. लन्डन भिक्टोरिया स्टेशन, लन्डन ब्रिज स्टेशन, र लन्डन सेन्ट. Pancras स्टेशन सबै लगभग एक घण्टा लिन प्रत्यक्ष सवारी छ.
गर्न कार्डिफ ब्राइटन
एक पटक ब्रिङ्टनको, तपाईंले केही साँच्चै विशेष क्षेत्रमा वरिपरि हिँड्ने गरेर आफ्नो खुट्टा पसार्नु गर्न सक्छन्. शहरमा घाट प्रसिद्ध छ (र यसको उचित-जस्तो वातावरणमा अत्यधिक मनोरंजक धन्यवाद), र केही पुराना पसलहरूमा र अन्वेषण लायक रेस्टुरेन्ट जिल्लामा छन्. फुटबल-बुद्धिमानी, तपाईं Falmer स्टेडियम गर्न लाग्यौं गरिने, जो लिग मा नयाँ व्यक्तिहरूलाई मध्ये एक छ. ब्राइटन & Hove अल्बियन अंग्रेजी फुटबल को शीर्ष उडान मा एक Powerhouse छैन, तर यसको प्रशंसक उत्साहित हुन सक्छ र मिलान न्यानो मा एक दिउँसो वा साँझ खर्च गर्न ठूलो तरिका हो समुद्र तट शरद ऋतु मा शहर.
लिलिन लन्डन यूरोस्टार ट्रेन
लियोन देखि लन्डन यूरोस्टार ट्रेन
रोटरडम लन्डन यूरोस्टार ट्रेन
एन्ट्वर्प लन्डन यूरोस्टार ट्रेनहरू
ब्राइटन पछि, तपाईं पश्चिम तिर अप circling सुरु गर्न आवश्यक छ, र त्यहाँ क्षेत्र केही विकल्पहरू. तपाईं सकेजति दक्षिण पश्चिम मा बौर्नेमौथ वा साउदाम्पटोन गर्न यात्रा, उदाहरण को रुपमा, दुवै शहर रूपमा छ प्रिमियर लिग टोली. तर किनभने फुटबल अप उत्तर राम्रो छ (र त सहर हो, यकीनन), यसलाई साथै उत्तर सार्ने सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. त्यसैले म कार्डिफ शीर्षक सिफारिस गर्न चाहन्छौँ, वेल्स. कार्डिफ सेन्ट्रल ब्राइटन स्टेसनबाट रेल चलाउन सक्नुहुन्छ बारेमा चार देखि चार-र-एक-आधा घण्टा, एक तीन परिवर्तनहरू ठाउँबाट संग. यो रेल चालु यो मार्गमा थप वा कम सबै दिन.
लिभरपूल गर्न कार्डिफ
कार्डिफ, तपाईं मा कार्डिफ सिटी स्टेडियम कार्डिफ शहर देखेर गरिने, जो यस स्तर को लागि एक एकदम घनिष्ठ स्थल छ. र आफ्नो यात्रा Swansea शहर विरुद्ध प्रतिद्वंद्विता मिलान हेर्न समय तपाईं के भने, तपाईं एक वास्तविक व्यवहार लागि हुनेछु. यो अन्ततः टाढा उत्तरी तर एन को बडा फुटबल सहर गर्न मार्गमा एकदम छिटो स्टप हुनुपर्छ. तीन- लिभरपूल लाइम सडक गर्न कार्डिफ केन्द्रीय देखि चार घण्टा रेल मेरो सिफारिस छ. यो एक एकदम नियमित र सरल छ मार्ग, सामान्यतया सिर्फ एक वा दुई परिवर्तनहरू संग, र सही अंग्रेजी फुटबल को स्मरणमा तपाईं लिन्छ. होइन उल्लेख रेल सही Cotswolds साथ तपाईं लिन्छ, एक भन्ने एक भव्य प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटक आकर्षण र नै.
न्यूक्यासल गर्न लिभरपूल
लिभरपूल मा, तपाईं अन्वेषण गर्न केही समय छुट्याइएको गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ, यो साँच्चै एउटा प्रामाणिक र सुन्दर सहरको रूपमा. तर फुटबल अझै पनि मुख्य आकर्षण छ. Anfield, जहाँ लिभरपूल खेल्छ, सबै भन्दा राम्रो प्रिमियर लिग स्टेडियमों बीच हुन जानिन्छ, र धेरै विश्वास यो वर्ष हुन सक्छ टोलीमा लागि प्रिमियर लिग महिमा प्राप्त र एक च्याम्पियनशिप कब्जा गर्न. त्यो स्टेडियम भन्न बस छ, यसको ऊर्जा लागि पहिले नै ज्ञात, अर्को वर्ष या त को लागि गूंज गर्नुपर्छ, र राम्रो बेलायत को सबै भन्दा राम्रो फुटबल अनुभवको लागि बनाउन सक्छ.
यो बाट बिन्दु, त्यहाँ केही विकल्प छन्. आफ्नो समय सीमित छ भने, यसलाई लन्डन फिर्ता शीर्षक अघि म्यान्चेस्टर गर्न धेरै छोटो यात्रा लिन सर्वश्रेष्ठ हुन सक्छ. त्यहाँ समय भने, तथापि, म म्यान्चेस्टर भूत र उत्तरी जाँदै सिफारिस गर्न चाहन्छौँ, एक लगभग लिभरपूल लाइम सडक बाट न्यूक्यासल गर्न तीन घण्टे सवारी हुनुपर्छ के. तपाईं एक सीधा प्राप्त गर्न सक्छन् सवारी, र, जबकि यो नक्सामा यो सारा रूपरेखा को सबैभन्दा लामो खण्ड जस्तो देखिन्छ, यो खराब यात्रा गर्न साँच्चै हो.
म्यान्चेस्टर गर्न न्यूक्यासल
सेन्ट. न्यूक्यासल मा जेम्स 'पार्क लीग मा Nicest स्टेडियम हुन सक्छ, भने पनि यो एकदम मिल्ने सक्दैन इतिहास Anfield जस्तै ठाउँ को. यो एक सुन्दर, एकल आए, र एक जहाँ त्यहाँ आवेग को एकदम बिट हुन सक्छ. साँच्चै, एक हाल लिग ओपनर अगाडी, यो न्यूक्यासल Tottenham Hotspur विरक्तलाग्दो सक्छ सुझाव थियो किनभने Tyneside मा नयाँ-सिजन बज को र आवेग र विश्वास छ कि यो भीड आउन सक्छ. त्यो उदास हुन आउनु गर्नुभयो, तर यो अझै पनि उद्धृत नै कारण खेल हेर्न एक प्रेरक ठाउँ छ. त्यो यो एक धेरै योग्य चक्कर बनाउँछ.
न्यूक्यासल मा छिटो मिलान पछि, तपाईं म्यान्चेस्टर फिर्ता रेल समातेर सक्नुहुन्छ, संभवतः मा धेरै नै दिन निर्धारण बाहिर काम गर्दछ भने. न्यूक्यासल सेन्ट्रल स्टेशन गर्न म्यान्चेस्टर भिक्टोरिया हुनुपर्छ एक दुई-र-एक-आधा एक भन्दा बढी परिवर्तन बिना घण्टा यात्रा.
त्यहाँ म्यान्चेस्टर धेरै विकल्पहरू छन्, लीग सबैभन्दा प्रमुख टोली दुई रूपमा – म्यान्चेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड – शहर घर कल. तपाईं विशेष फुटबल मा हुनुहुन्छ र तपाईं यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छैन राम्रो यात्रा गर्न एक माध्यम रूपमा भने, तपाईंलाई एउटा गो दुवै टोली फसाउन प्रयास गर्नुपर्छ, यदि तालिका अनुमति दिन्छ. अन्यथा, तपाईं साथै एक सिक्का पल्टाउन सक्छ. मानिस Utd। गरेको पुरानो Trafford छ एक ऐतिहासिक स्टेडियम र अविश्वसनीय प्रशंसक एक; मानिस सहरको Etihad स्टेडियम थप राज्य-को-को-कला हो, र शहर लेट को राम्रो टोली भएको छ.
एक पटक तपाईं म्यान्चेस्टर मा सक्नुभयो यो एक चिल्लो छ, दुई-र-एक-आधा वा तीन-घण्टा रेल फिर्ता गर्न सवारी लन्डन म्यान्चेस्टर भिक्टोरिया वा म्यान्चेस्टर Piccadilly देखि. कि बिन्दुमा, को यात्रा एक र्याप छ! तपाईं क्लब को एक हेर्न लण्डन तपाईंको बाँकी समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हुनत तपाईं यात्रा को सुरुमा देख्न गर्नुभयो. रूपमा उल्लेख, त्यहाँ धेरै राम्रो विकल्प हो.
तपाईं ट्रेन यात्रा अन्वेषण र केही फुटबल रमाइलो गर्न तयार छन्? सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट अर्डर टिकट गाडिहरु बचत एक ट्रेन छ
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#football #soccer रेल यात्रा traveltips
Passionate about all things film, soccer and watching movies, helping others make their own way around this world. When I have spare time i love to also write and share my thoughts and stories. - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्